Alfa Lipoic Acid | R-ALA Powder (1077-28-7) Soosaarayaasha & Warshadaha
Budada Alpha-lipoic acid / thioctic acid waa kiimiko fiitamiin u eg oo loo yaqaan antioxidant. Khamiirka, beerka, kilyaha, isbinaajka, broccoli, iyo baradhada ayaa ah ilo wanaagsan oo laga helo alfa-lipoic acid / thioctic acid. Waxaa sidoo kale lagu sameeyaa shaybaarka si loogu isticmaalo daawo ahaan. Alfa-lipoic acid / thioctic acid badanaa afka ayaa looga qaadaa sonkorowga iyo astaamaha dareemayaasha la xiriira ee sonkorowga oo ay ku jiraan gubasho, xanuun, iyo kabuubyo lugaha iyo gacmaha ah. Waxaa sidoo kale lagu duraa xididka xididka (IV) iyadoo loo adeegsanayo isla adeegsigaas. Qiyaaso badan oo alfa-lipoic acid / thioctic acid ah ayaa laga ansixiyay Jarmalka si loogu daweeyo astaamaha neerfaha la xiriira.
Macluumaadka Saldhigga Budada budada ee Alfa-lipoic Acid
magaca Budada Alfa-lipoic Acid
Magaca kiimikada (+/-) - 1,2-Dithiolane-3-pentanoic Acid; (+/-) - 1,2-Dithiolane-3-valeric Acid; (+/-) - Alfa-lipoic Acid / Thioctic acid; (RS) -α-Lipoic Acid
Isku mid ahaanshaha DL-Alpha-lipoic Acid / Thioctic asiidh; Liposan; Lipotion; NSC 628502; NSC 90788; Protogen A; Thioctsan; Tioctacid;
Formula kelli C8H14O2S2
Miisaanka kelli 206.318 g / mol
Dhibicda Biyaha 60-62 ° C
Muhiimadda InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Imaanshaha Iftiin huruud ilaa Jaale
Nolosha badh 30 daqiiqo ilaa 1 saac
milmi Dhibaatada Chloroform (Wax yar), DMSO (Si wax yar), Methanol (Si xoogaa)
Codsiga Dhiirrigeliyaha dufanka-dheefshiidka.
Alfa-lipoic Acid budada Sharaxa Guud
Budada Alpha lipoic acid (ALA) waa antioxidant. Waxaa si dhakhso leh looga soo qaadaa marinka caloosha iyo caloosha. Wuxuu ku milmaa biyaha iyo dufanka jirka ku jira labadaba. ALA waa antioxidant awood leh. Shaqadani waxay ka ilaalin kartaa unugyada neerfaha waxyeelada. Xaaladaha sida sonkorowga waxaa caawin kara antioxidants sida ALA. ALA waa coenzyme ku lug leh dheef-shiid kiimikaadka wareega iyo wareegga Krebs, taxane falcelin kiimikaad ah oo ay adeegsato mitochondria si ay uga sii deyso tamarta kaarbohaydraytyada, dufanka, iyo borotiinnada ku jira kaarboon laba ogsaydhka, iyo tamarta kiimikada ee qaabka adenosine triphosphate (ATP).
ALA waxaa caadi ahaan laga helaa khudradda sida isbinaajka iyo broccoli, iyadoo qaddar yar laga helay baradhada, baradhada macaan, hilibka budada leh, digirta, iyo yaanyada. ALA sidoo kale waxaa laga helaa hilibka, gaar ahaan hilibka xubnaha jirka sida wadnaha, beerka, iyo kalyaha.
Isticmaalka ugu weyn ee loo yaqaan 'ALA' waa daaweynta daweynta cudurka macaanka ee sonkorowga. Neuropathy-gu wuxuu keenaa isbeddelo xagga dareenka ah. Kuwaas waxaa ka mid ah xarig, gubasho, xanuun, iyo kabuubyo meelaha maqaarka ah. Dhowr daraasadood oo yaryar ayaa sidoo kale muujiyay in ALA ay gacan ka geysan karto kordhinta xasaasiga insulin. Waxay yareyn kartaa heerarka sonkorta dhiigga ee dadka sonkorow qaba. Baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si tan loo xaqiijiyo.
Taariikhda Alfa-lipoic Acid Taariikhda
Budada loo yaqaan 'Alpha-lipoic acid / thioctic acid (ALA)' waxaa markii ugu horaysay la helay 1937, markii uu Snell ogaaday in nooc bakteeriya ahi ay ku tiirsan tahay cabitaanka baradhada si ay u tarmaan. Tani waxay horseeday alpha-lipoic acid / thioctic acid oo loo yaqaanay cunsurka kobaca baradhada in mudo ah kadib markii la ogaaday. Si kastaba ha noqotee, lama go'doomin illaa 1951 by Reed. Isticmaalkii ugu horeeyey ee caafimaad ee ALA waxaa laga duubay Jarmalka 1959 si loogu daweeyo sunta ka timi amanita phalloides, oo badanaa loo yaqaan boqorka geedaha.
Alfa-lipoic acid / thioctic acid (ALA) waxaa lagu sameeyaa si dabiici ah jirka waxaana laga yaabaa inuu ka difaaco dhaawaca unugyada xaalado kala duwan. Ilaha cuntada ee hodanka ku ah alpha-lipoic acid / thioctic acid waxaa ka mid ah isbinaajka, broccoli, iyo khamiirka. ALA, oo loo yaqaan "oksaydh caalami ah," ayaa loo adeegsaday muddo tobanaan sano ah Yurub si loogu daaweeyo xaaladaha neerfaha, oo ay ku jiraan dhaawaca dareemayaasha ee ka dhasha cudurka macaanka oo si xun loo xakameeyo.
Waxaa jira caddeyn adag oo ah in ALA laga yaabo inay caawiso daaweynta nooca 2 ee sonkorowga iyo neuropathy. Sida lagu sheegay daraasad lagu sameeyay 685 daaqsade, ALA wuxuu ka mid ahaa 10-kii ugu badnaa ee lagula taliyo raashin dheeri ah sababtuna tahay waxtarka ay u leedahay dhimista heerarka sonkorta dhiigga ee sareeya.
Alfa-lipoic Acid budada Mechanism Of Action
Alfa-lipoic acid / thioctic acid waxay umuuqataa inay kaa caawinayso kahortaga noocyada waxyeelada unugyada qaarkood ee jirka, waxayna sidoo kale soo celisaa heerarka fitamiinada sida fiitamiin E iyo fitamiin C. Waxaa sidoo kale jira cadeymo muujinaya in alfa-lipoic acid / thioctic acid ay hagaajin karto shaqada iyo qabashada neerfaha ee sonkorowga.
Alpha-lipoic acid / thioctic acid waxaa loo isticmaalaa jirka si loo jajabiyo karbohaydraytyada loona sameeyo tamar xubnaha kale ee jirka.
Alfa-lipoic acid / thioctic acid waxay umuuqataa inay u shaqeyso sidii antioxidant, taas oo macnaheedu yahay inay siin karto maskaxda maskaxda xaaladaha burburka ama dhaawaca. Saamaynta antioxidant-ka waxay sidoo kale caawin kartaa cudurada beerka qaarkood.
Alfa-lipoic Acid (1077-28-7) Codsi
Maqaarka gaboobay.Baaritaankii hore wuxuu soo jeedinayaa in la marsado kareemka ay ku jiraan 5% alfa-lipoic acid/thioctic acid waxay yareyn kartaa khadadka wanaagsan iyo maqaarka maqaarka oo ay sababto dhaawaca qorraxda. Sidoo kale, qaadashada badeecad gaar ah oo ay ku jirto alfa-lipoic acid iyo walxo kale ayaa u muuqda inay hagaajinayso dabacsanaanta oo ay yareyneyso laalaabkii iyo qallaylkii maqaarka gaboobay.
Qalliinka wadnaha halbowlaha wadnaha (CABG). Cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in la qaato shey ay kujiraan alpha-lipoic acid / thioctic acid, coenzyme Q10, magnesium, omega-3 fatty acids, iyo selenium ilaa 2 bilood kahor iyo 1 bisha qalliinka kadib waxay umuuqataa inay yareyneyso dhibaatooyinka soosocda kadib qaliinka CABG.
Qaadashada alpha-lipoic acid / thioctic acid afka ama faleebada waxay umuuqataa inay wanaajineyso heerarka sonkorta dhiiga ee dadka qaba nooca 2aad ee sonkorowga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira cadeymo aan isweydiin karin oo muujinaya inaysan saameyn ku yeelan sonkorta dhiiga. Sababaha iswaafaqla'aanta waxay laxiriiri karaan waqtiga dheer ee bukaan socodka laga helay cudurka sokorowga, isticmaalka daawooyinka sonkorowga, ama daahirnimada daaweynta alfa-lipoic acid / thioctic acid alfa-lipoic acid / thioctic acid uma muuqato inay hagaagayso heerarka sonkorta dhiigga ee dadka qaba nooca 1aad ee sonkorowga.
Xanuunka dareemayaasha macaanka. Qaadashada 600-1800 mg ee alfa-lipoic acid/thioctic acid afka ama IV waxay u muuqataa inay hagaajinayso astaamaha sida gubashada, xanuunka, iyo kabuubyada lugaha iyo gacmaha dadka qaba sonkorowga. Waxay qaadan kartaa 3 ilaa 5 toddobaad daawaynta calaamadaha si ay u soo hagaagaan. Qiyaasaha hoose ee alfa-lipoic acid/thioctic acid uma muuqato inay shaqeynayaan.
Miisaanka oo luma. Cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in qaadashada alfa-lipoic acid/thioctic acid 8-48 toddobaad ay xoogaa hoos u dhigi karto culeyska jirka dadka aadka u cayilan.
Alfa-lipoic Acid (1077-28-7) Cilmi-baaris dheeri ah
Alpha-lipoic Acid / Thioctic acid waa antioxidant ku jira cuntooyin badan, waana mid si dabiici ah loogu sameeyo jirkeena. Sanado badan, qiyaaso badan oo alfa-lipoic acid / supioctic acid supplements ayaa loo isticmaalay qaybo ka mid ah Europe si loo hubiyo noocyada dhaawaca dareemayaasha. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan inay sidoo kale kaa caawin karaan nooca sonkorowga 2.